auteur may 19, 2017 Commentaires fermés
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny 18 mey 2017 ny « foire Internationale de Madagascar » izay haharitra 4 andro. Andiany faha 12 no tanterahana etsy amin’ny zone FORELLO Tanjombato , ahitana orin’asa 209 mandray
auteur may 9, 2017 Commentaires fermés
Tonga nanome voninahitra sy nanatrika ny « Célébration de la Journée de L’Union Européenne » tetsy amin’ny « Résidence, Villa Iaranja-Tsarasaotra » ny Ben’ny Tanàna Lalao RAVALOMANANA androany 09 may. Izay niarahana tamin’ireo olona manankaja maro samihafa sy
auteur aprily 26, 2017 Commentaires fermés
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny talata 25 aprily 2017 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny faha 150 taonan’ny nanaovanan-tsonia ny fifanarahana Diplomatika voalohany teo amin’i Etazonia sy Madagasikara ; America Week » no iantsoana
Notokanana ny datin’ny Alarobia 19 Aprily 2017 ny Tsangambaton’ny Lions Club International etsy Ampefiloha ; Manomboka izao koa dia hitondra ny anaran’ny Lions Club Internationale ny zaridaina eny antoerana ; Nomarihana tamin’ny fomba Ofisialy
auteur aprily 14, 2017 Commentaires fermés
Nanolotra Kidoro toerana ho an’olona iray miisa 60 ho an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny Orinasa VITAFOAM androany maraina 14 aprily 2017 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely. Fiarahamiasa 3p, eo amin’ny fanjakana sy ny tsy
Fiaraha-miasa eo amin’ny vondrona Eropeana sy ny CUA
auteur aprily 7, 2017 Commentaires fermés
Nisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Vondrona Eropeana sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mikasika ny fanampiana manokana amin’ny fahazoana « Acte de Naissance » eto amin’ny Boriborintany enina. Ny tanjona moa dia ny mba hananan’ireo
Signature du Pacte alimentaire de Milan par la CUA
Antananarivo est la première grande ville de l’Océan indien engagée dans le Pacte Alimentaire de Milan. Le protocole a été signé ce matin par Madame le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo, Lalao Ravalomanana,
DIASPORA avy an’ny TOULOUSE sy PARIS nanome fanampiana ho an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra
auteur aprily 3, 2017 Commentaires fermés
Nanome fanampiana ho an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny Solontenan’ny DIASPORA avy an’ny TOULOUSE sy PARIS, natolotra ny Ben’ny Tanàna Lalao RAVALOMANANA izany androany 03 avril 2017 maraina tato amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely. Nambaran’ny Ben’ny
Tatitry ny dian’ny ben’ny tanàna tany ivelany
auteur martsa 31, 2017 Commentaires fermés
Nanao tatitry ny diany tany ivelany ny zoma lasa teo, ny mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny Tanàna Marc Ravalomanana. Paris, Bruxelles ary Copenhague no notsidihany ka nahazoany niresaka ny fampandrosoana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Tany Danemark
CUA sy Région Ile De France
auteur martsa 28, 2017 Commentaires fermés
Tonga nitsidika ara-asa ny Ben’ny Tanànan’Antananana Lalao RAVALOMANANA sy ny mpiara miasa aminy, ny « Directeur de la Coopération Internationale et Tourisme de la Region Ile de France, Eric Fajole, tao amin’ny Lapan’ny Tanàna